Uluhlu lwee-Chrome Scraper Plugins Kwi-Web Scraping Ebonelelwa Ngumhloli We-Semalt
Ukufumana idatha kwiiwebhusayithi okanye kumaphepha ewebhu kwiipredishithi kunye nee-Values ​​(VCs). lenziwe lula. I-Web data extraction, ebizwa ngokuba ngu-11) ukukhwa kwewebhu , yinkqubo yokukhipha inani elikhulu lwedatha kwiindawo.
Indlela yokusebenzisa i-Chrome Web Scraper
Ukuba ungenayo ulwazi lwenkqubo, isofthiwe yokuqhafaza iwebhu iphuhliselwe wena. Kungekudala, enye indlela elula ukuyisebenzisa yokucoca iwebhu yaziswa. Ngokusebenzisa izandiso zesiphequluli se-Google Chrome ziya kukhululeka kwisitoreji sewebhu se-Google, ngoku unokwenza i-web scraping. Nolu uluhlu lwezandiso ze-Chrome zokuqwalasela.
I-screen scraper enye yeeplagi ezikhethileyo ze-Chrome eziqhelekileyo zisetyenziswe kwisikrini. Kubaqalayo, ukucoca kwesikrini yindlela yokukhupha kunye nokukhipha ulwazi kumaphepha ewebhu kunye nakwiisayithi. Ukuba awunakho ubuchule bokubhala, cinga ukukhangela kwesikrini njengoko inkqubo ihamba ngokuzenzekelayo.
Iinkcukacha ezikhishwe kwiisayithi usebenzisa i-plugin ye-Screen Scraper ye-Chrome inokukhutshwa njenge-JSON okanye i-CSV ifayile. Le iplagin isekela iphethini ye-XPath ne-Element Selectors. Isikrini se-Scraper sisilula kwaye sikhululekile ukusebenzisa isandiso esifumaneka lula kwisitolo sewebhu se-Chrome.
I-Web Scraper isandiso seGoogle Chrome esicacisa idatha kwiisayithi ngokusebenzisa i-sitemap. Idatha efunyenwe kwiiwebhusayithi isebenzisa eli longeza lingagcinwa kwifayile ye-CSV okanye i-CouchDB. Ngamahedeni, ungasebenzisa ngokufanelekileyo iWebhu Scraper ukutshiza amaninzi amaninzi okanye iphepha. Kwiimeko ezininzi, isandiso sesiphequluli se-Chrome sisetyenziselwa ukukhipha ulwazi olufana nezixhumanisi, itekisi kunye neetafile.
i-iMacro yi-plugin ye-Chrome yespredishithi esetyenziselwa ukuhlolwa kwewebhu kunye nokukhishwa kwedatha. iMacro isebenza ngokurekhoda iintshukumo zomsebenzisi ngexesha lokutyelela. Isandiso sesiphequluli se-Chrome lirekhoda imisebenzi kwiwebhsayithi ekufuneka isetyenziswe kwixesha elizayo. Ukuba iprojekti yakho yangoku isetyenziswe ukuhlolwa okanye ukuhlolwa kwewebhusayithi, lo yi-plugin ukunika udonga.
NgeMacro, unokukhupha iifayile ngokukhawuleza kwaye ukhumbule ukungena ngemvume kwegama lakho. Ukongezwa kwe-IMacro kufumaneka mahhala kwivenkile yewebhu ye-Firefox, i-Internet Explorer, kunye nesiphequluli se-Chrome.
Namhlanje, ukufumana ulwazi oluchanekileyo kwiiwebhusayithi akulula. Le yilapho ukufakwa kwesoftware kufakwa. I-Miner yedatha isandiso sesiphequluli se-chrome esisetyenziselwa ukukhipha ulwazi oluncedo kwiiwebhusayithi. Ukusebenzisa i-plugin yesiphequluli, ungayifumana idatha esuka kumasayithi kwaye uthumele idatha kwi-Google AmaSpredishithi okanye kwi-Excel sheets.
Ukwandiswa kweminye yeDatha kusetshenziselwa ukukhahlela iitafile ze-HTML nokuthumela ulwazi kwi-Microsoft Excel okanye kwi-CSV ifayile. Ukuba ungobuchule bokusebenzisa abakhethi be-XPath, le yile iplagiza ye-browser.